မင်းတစေ: မင်းလားကွ အကောင်းမြင်သမား
စိတ်တေလေကို နှိပ်ကွပ်သူ Mintasay at 5:58 PM
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ကို ယုံတယ်..။
ခေတ်ကို မှတ်မ်းတင်တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
ခေတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံကို အသေးစိပ် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ခံစားမှုအဖြစ်အပျက်လေးပါပဲ .. ။ အကြောင်းအရာက လူကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတယ် .. ။ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်ပုံလေးက ရင်နင့်စရာ .. ။ ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ရင်တွင်းကအပူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် .. ။ စီးပွားရေး လွန်စွာကျပ်တည်းမှုများရဲ့ ရလဒ်တွေပဲလို့ စိတ်မသက်မသာ တွေးမိရင်း …………………… ။
နောက်ဆုံးကြုံတွေ့လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာ ဘယ်လို ခံစားချက်၊ ဘယ်လိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ သူ့ဘ၀ကိုရင်ဆိုင်မှာလဲနော်။ အစ်ကိုရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ထပ်ပြောရင်ပေါ့သွားမှာစိုးလို့။
မင်းတစေရဲ့ နောက်ထပ် ကျည်ဆံတစ်တောင့် ရင်ကို ဖောက်သွားပြန်ပြီ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညီလေးရေ ... အစ်ကိုကြီး လာဖတ် သွားတယ် ... မှတ်ချက်တော့ မပေး တော့ပါဘူး :P
အစ်ကို က အလုပ်လုပ် ရတာပဲ ပျော်တာ မို့ ပါ :)
အင်း.......၀င်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ရင်တော့ မြင်းထိန်းငတာလို့ ပုဆိုးအုပ်တအုပ်နဲ့ နုတ်ပိတ်ခံရမဲ့ကိန်းပဲ
အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ ဖြစ်သွားပြီ။
btw, ကဗျာလေးဘယ်ရောက်သွားလဲ.... ပြန်ဖျက်လိုက်တာလား?
အနှစ်သာရရှိလှပါတယ်။ ရေးဖွဲ့သုံးနှုန်းတင်စားထားတဲ့ စကားလုံးတွေတော်တော့်ကိုကောင်းလှတယ်။
ကလူသစ်စီဘောက်မှာရေးသွားတာနဲ့ပက်သက်ပြီး တခုခုတော့မှားနေပြီလို့ ထင်မိတယ်။ ကလူသစ်ရဲ့ ကော်မန့်နဲ့ပက်သက်မယ်လို့ထင်မိလို့ ထပ်လာပြောရတာပါ။ ကိုမင်းတစ္စေ မြင်းထိန်းငတာဇာတ်လမ်းကိုမမှတ်မိဘူးထင်တယ်။ ရှေးတုန်းက မြန်မာပညာရှိကြီးတယောက်ရှိတယ်။ နာမည်ကတော့ ရောရောထွေးထွေးဖြစ်နေလို့ မရေးတော့ပါဘူး။ သူက စာကောင်းပေကောင်းတွေရေးတယ်။ သူက စာကောင်းပေကောင်းရေးလိုက်တိုင်း သူ့ရဲ့ မြင်းထိန်းက လူထူထူဆိုရင် သူ့ဆရာရဲ့စာကို ချီးကျူးတော့တာပဲတဲ့။ ရာဇ၀င်က တိတိကျကျရေးမထားပေမဲ့ ပညာရှိရေးတဲ့စာကို မြင်းထိန်းလိုအဆင့်က ချီးကျူးတယ်ဆိုတော့ ကလူသစ်ထင်တာတော့ တလွဲတွေချည်းပဲထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့နောက်ဆုံး ပညာရှိကြီးက သူ့မြင်းထိန်းကိုခေါ်၊ ပုဆိုးတအုပ်ဆုချပြီး သူ့စာတွေကို မချီးကျူးပါနဲ့လို့ ပိတ်ပင်ယူရတယ်။
ကလူသစ်ဆိုလိုတာက ကိုမင်းတစ္စေစာကို ကလူသစ်က၀င်ချီးကျူးလိုက်ရင် မြင်းထိန်းလို နုတ်ပိတ်ခံရတော့မှာပဲလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကိုအောင်သာငယ်နဲ့တုန်းကလဲ တခါဖြစ်ဘူးတယ်။ ဒီလိုပဲ ခပ်တိုတိုပြောလိုက်တာ နားလည်မှုလွဲသွားသေးတယ်။ နောက်ဆို ကော်မန့်တိုတိုမရေးဖို့ ဆင်ခြင်ရမှာပေါ့လေ။ အဆင်ပြေပါစေဗျား။
အများပိုင်ကျိန်စာရဲ. နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်အပျက်တွေကို
မှတ်ချက် ဘယ်လိုပေးရမယ်မှန်းမသိတော့ မပေးသွားတော့ဘူး ။ ရေးသားထားတာတွေ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
ဇာတ်သိမ်းမှာ ဖမ်းထားတာကိုး။ အားပေးနေတယ်။
ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်...။ ထိတယ်ဗျာ...။
လာတာက တမီးလ်စာနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ဖို့လာတာ...။ ပို့စ်ပျောက်နေတော့ နောက်ဆုံးကျန်ာတပဲ ဖတ်ရတာပါ့...။
Great Scarcastic With Hight Definition And Brilliant Conclusion!
ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ သဘောတွေ့ သွားပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း........။
အကောင်းမြင်သမားကြီး ဘယ်လိုများ ဆက်တွေးမှာပါလိမ့်လို့ တွေးမိပါရဲ့...
နောက်ထပ် ဒါမျိုးလေးတွေ အများကြီး ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်..
ရင်ထဲတော့ ... ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာ...
တကယ် အကွက်ချထားတဲ့ မှောက်မှားမှုပဲ ဆရာ။ အဲဒီလိုကြီးတွေ တကယ်မရှိစေချင်တော့ဘူး။ အက်ဆေးအရေးမှာတော့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ။